IFirefox 82 iza nokuthuthuka kwevidiyo, ukusheshisa nokuningi | Kusuka kuLinux
Inguqulo entsha yeFirefox 82 isivele ikhishiwe futhi iyatholakala ukulanda, ngaphezu kokuvuselelwa kwinguqulo ngokuxhaswa kwesikhathi eside okungu-78.4.0.
Le nguqulo entsha yesiphequluli iza nokuthuthuka okuhlukahlukene esingathola ukuthi kwenziwe ngcono ukwenza ngcono i- isipiliyoni sokubukwa kwamavidiyo.
Isibonelo, Kumodi Yesithombe-Esithombeni, indawo nesitayela sezinkinobho zokulawula kushintshiwe ukudlala ukubenza babonakale ngokwengeziwe. Kubasebenzisi be-MacOS, kunqamulelwa isinqamuleli sekhibhodi (Option + Command + Shift + Right Bracket) ukuvula i-Picture in Window Picture, esebenza ngisho nangaphambi kokuba ividiyo iqale ukudlala. IWindows isebenzisa i-DirectComposition ye-hardware video decoding ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-CPU nokwandisa impilo yebhethri.
Kuwo wonke amafayili we- Abasebenzisi beWindows 10 abanehadiwe edingekayo, injini yokwakhiwa kweWebRender, ibhalwe kuRust, inikwe amandla ngokuzenzakalela, okuvumela ukufezekisa ukwanda okukhulu ekunikezeni isivinini nokunciphisa umthwalo ku-CPU ngenxa yokukhipha imisebenzi yokunikela kokuqukethwe kwekhasi ohlangothini lwe-GPU.
YeLinux, abashayeli beNVIDIA hlala ohlwini lwe-WebRender blockkanye nabashayeli be-Intel lapho usebenzisa izinqumo zesikrini ezingama-3440 × 1440 nangaphezulu.
Ku-Android, injini yeWebRender inikwe amandla kumadivayisi ane-Adreno GPUs 5xx (Google Pixel, Google Pixel 2 / XL, Oneplus 5), Adreno 6xx (Google Pixel 3, Google Pixel 4, Oneplus 6), kanye ne-Pixel 2 ne-Pixel 3 Smartphones.
Abasebenzisi be-NVIDIA Binary Drivers ku-Linux banike amandla ngesandla i-WebRender (gfx.webrender.all = true mayelana: config) futhi ungasebenzisi ukwakheka ingabuyela emuva, lapho uhhafu ophezulu wesikrini uba unxande ogcwele.
Le nkinga ingaxazululwa ngokunika amandla ukuhlanganiswa noma ngokuthumela noma yikuphi kokuhlukahluka kwemvelo okulandelayo: MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION = system (ngeshwa inika amandla iwindows isihloko) noma i-MOZ_X11_EGL = 1 (le ndlela ikhubaza ukwesekwa kweWebGL 2).
Umsebenzi wenziwe ukusheshisa ukulayishwa kwamakhasi nokunciphisa isikhathi sokuqala isiphequluli.
Kungezwe i- amandla wokubuka ama-athikili amasha lapho ugcina ikhasi kwinsizakalo yePocket Via inkinobho kuphaneli: Ingxoxo ye-pop-up manje ikhombisa ukukhethwa kwama-athikili kusuka kusayithi elengeziwe elikhethwe abanye abasebenzisi bePocket.
Iqoqo lezilungiselelo ezivumelanisiwe phakathi kwamadivayisi linwetshiwe. Isibonelo, ukuvumelanisa kokukhethwa kokuskrola kungeziwe, kanye nezilungiselelo zekhibhodi ekusikrini nemodi yesithombe-esithombeni.
Ku-telemetry eqoqwe ku-Linux, i ukubalwa kwemininingwane mayelana neprotocol yesistimu yewindows (Wayland, Wayland / DRM, XWayland noma iX11).
I-Media Session API inikwe amandla ngokuzenzakalela, enikezela ngamathuluzi wokumisa ibhulokhi enolwazi mayelana nokudlalwa kokuqukethwe kwe-multimedia endaweni yesaziso. Ngale API, uhlelo lokusebenza lewebhu lungenza ngokwezifiso ukubonakala kolwazi endaweni yesaziso, ngokwesibonelo, ukubeka izinkinobho zokuma isikhashana, ukuhamba ngokulandelana noma ukuya ekwakhiweni okulandelayo.
Ngokwengeziwe, nge-Media Session API, ungangeza abaphathi bezinkinobho zemidiya ezibangelwa endaweni yesaziso noma lapho isilondolozi sesikrini sisebenza.
Ngaphezu kokuqanjwa okusha nokulungiswa kwamaphutha, IFirefox 82 imise ubungozi obungu-15, lapho eziyi-12 zimakwe njengeziyingozi. Ukuba sengozini kwe-10 (kuhlanganiselwe i-CVE-2020-15683 ne-CVE-2020-15684) kubangelwa izingqinamba zememori njengokugcwala kwe-buffer nokufinyelela ezindaweni zememori esezikhululiwe.
Lezi zinkinga zingaholela ekusetshenzisweni kwekhodi enonya lapho kuvulwa amakhasi akhiwe ngokukhethekile.
Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeFirefox 82 kuLinux?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IFirefox 82 ifika nokuthuthuka kwevidiyo, ukusheshisa nokuningi